DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခ
DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် (၂၄.၁၂.၂၀၁၆)
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် နေရာတချို့မှာ မိုးရွာနိုင်ပြီး မိုးရေချိန်ကတော့ ၂၀ မီလီမီတာ ၀န်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.. ကျန်ဒေသတွေမှာကတော့ ၂၀မီလီမီတာအောက်ကို လျော့နည်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
This video (DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် (၂၄.၁၂.၂၀၁၆)) has been derived to us from the YouTube Data API v3 using this link. The googleapis.com domain is owned by Google (the parent company of YouTube). Therefore, we do not have control or permission to remove or modify videos served from googleapis.com.
ထို​င်း​ကို ၃​ဂိုး-ဂိုး​မ​ရှိ အြ​ပ​တ်နိုင်ခဲ့​လို့​ အုပ်စု​ဗို​လ်ြ​ဖစ်ဖို့​ မျှော်​လ​င့်ေ​န
AFC U 19ေ​ဘာ​လုံး​ပွဲ​စဉ်မှာ အိမ်ရှ​င်ြ​မန်မာ​အသ​င်း​ဟာ ထို​င်း​အသ​င်း​ကို ၃​ဂိုး ဂိုး​မ​ရှိ​နဲ့ေ​အာက်တို​ဘာ ၁⁠၁​ရ​က်ေ​န့​​ညေ​န​က အနိုင်ရ​ရှိ​ခဲ့ြ​ပီး အုပ်စု​ဗို​လ်ြ​ဖစ်ဖို့​ အလားအလာေ​တွေ​ပါ်​လာေြ​ကာ​င့်ြ​မန်မာ​ပရိ​သ​တ်ေ​တွေ​အာင်ပွဲ​ခံ​ခဲ့ြ​က​ပါ​တ​ယ်။ အီ​ရန်နဲ့​ ကစား​ရ​ဖို့​​ရှိ​တဲ့ြ​မန်မာ​အသ​င်း တ​က​ယ့်မျှော်​လ​င့်ချ​က်ေ​တွေ​ပး​ဦး​မှာ​လား။
ြ​မန်မာ​နဲ့​​ထို​င်း U 19 အသ​င်းေ​တွ ရန်ကု​န်ြ​မို့​ သု​ဝ​ဏ္ဏေ​ဘာ​လုံး​ကွ​င်း​မှာ ယှ​ဥ်ြ​ပိုင်ခဲ့​ရာ ပထမ​ပို​င်း မိ​န​စ်​၂​ဝ​အတွ​င်း​မှာ​ပဲြ​ငိ​မ်းချ​မ်းေ​အာင်က နှစ်ဂိုး​ဆက်တို​က် သွ​င်း​ယူခဲ့ြ​ပီးေ​နာက်ထပ်တစ်ဂိုး​ကိုေ​တာ့ တိုက်စစ်မှူးေ​အာင်သူ​က သွ​င်း​ယူခဲ့​ပါ​တ​ယ်။
DVB - နိုင်ငံရေးသမားတွေ တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တာ ရှောင်ရှားရမယ့် အခြေအနေပဲရှိသေး
လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တပ်မတော်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တာတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ့် အခြေအနေမှာပဲရှိသေးတယ်လို့ ၈၈မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဇေယျာချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV - 20.08.2017
ပ​ဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း
Maw Si Tone
၂၀၁၇ ဆီးဂိမ်း အသင်းကို နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူမယ့် ဦးကြည်လွင်
မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာယူ-၂၃အသင်းကို နည်းပြချုပ်အဖြစ် ဦးကြည်လွင် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကြည်လွင်ဟာ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာယူ-၂၃အသင်းကို
DVB - ကလေးစစ်သား ဟောင်းကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး
ကလေးစစ်သား အနေနဲ့စုဆောင်းခံခဲ့ရချိန်အကြောင်း မီဒီယာတစ်ခုကို ဖြေကြားခဲ့သူ ကိုအောင်ကိုထွေးကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ ကိုအာကာ သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
DVB - ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတွတား နှစ်၂၀ပြည့် သူတို့ပြောစကား
ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတွတား နှစ်၂၀ပြည့် သူတို့ပြောစကား
DVB - H1N1 ရာသီတုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းက ပွဲတချို့ပိတ်
H1N1 ရာသီတုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းက ပွဲတချို့ပိတ် လိုက်လို့ ပွဲကိုမှီခိုနေတဲ့ ဈေးသည်တွေ အခက်တွေ့နေတဲ့ သတင်းကို ခွန်ဘသာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
DVB TV - 20.0၈.၀၂၀၁၇
DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်( ၇ ဇွန်လ ၂၀၁၆)
တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာအနှံ့အပြားကနေ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါတယ်။
တင်ဆက် - ယွန်းရတီ
ရိုက်ကူး - ဒီဗွီဘီ
တည်းဖြတ် - ယွန်းရတီ
DVB - အမေရိကန်နိုင်ငံကပေးအပ်တဲ့ တန်းတူညီမျှအားကစားဆုကို Girl Determined အဖွဲ့ရရှိ
DVB TV - အမျိုးသမီးငယ်တွရဲ့ အခွင့်အရေးကို လူပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Girl Determined အဖွဲ့ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ တန်းတူညီမျှအားကစားဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ဦးထွန်းထွန်းသိန်း သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
DVB - ရွှေ့ဝါရောင် တော်လှန်ရေး (၁၀)နှစ်ပြည့် ဦးကျော်သူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အခုလာမယ့် စက်တင်ဘာဆိုရင် (၁၀)နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ အဲ့ဒီတုန်းက သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့လို ရုပ်ရှင် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ နှောင့်ယှက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီဦးကျော်သူနဲ့ မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။
တင်ဆက် - ကျော်ဇေယျ
DVB - အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ နှုန်းထား သတ်မှတ်မှု ၂၀၁၈ ဧပြီလမှ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်နိုင်တော့မည်
DVB TV - ၂ နှစ်တစ်ကြိမ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ဖို့ ပြဌာန်းထားတဲ့ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ နှုန်းထား သတ်မှတ်ကာလထက် နောက်ကျပြီး ၂၀၁၈ ဧပြီလမှ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်နိုင်တော့မှာပါ။ ကိုအာကာ သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
DVB - နေ့စဉ် မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် (၂၀ သြဂုတ် ၂၀၁၇ မနက်ပိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာကတော့ မိုးနည်းနိုင်ပြီး တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာကတော့ ၂၀-၈၀ မီလီမီတာ ၀န်းကျင်အတွင်း ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။
တင်ဆက် - လွင်မိုးအောင်
DVB - ကောလဟာလ တွေကြောင့် ကြက်ဥကြက်သား ရောင်းဝယ်ကျဆင်းတာကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆို
ကောလဟလ သတင်းတွေကြောင့် ကြက်ဥ၊ ကြက်သား အရောင်းအဝယ်ကျဆင်းပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာနေတာတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ ကာအကွယ်ပေးဖို့ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို သော်ဇင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB - လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပုံစံ (၇)တွေ ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပြီး မိုးစပါေးချးငွေ မရရှိ
ပဲခူးတိုင်း ပေါင်းတည်မြို့နယ်ထဲက လယ်သမား(၁၈၀၀) ကျော်ရဲ့ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပုံစံ (၇)တွေ ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပြီးနောက် နှစ်စဉ်ရရှိနေတဲ့ မိုးစပါးချေးငွေတွေ မရရှိတော့ပါဘူး။ ဒီသတင်းကို ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါ။
DVB TV - 19.08.2017
DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် (၇.၃.၂၀၁၇)
နေ့အပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ ၃၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိနိုင်ပြီး ကျန်ဒေသတွေမှာ ၃၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းအနည်းငယ်သာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်းအမြင့် ၁ ပေကနေ ၂ ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
DVB TV - နံနက်ပိုင်းမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်( ၆.၁၀.၂၀၁၆)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။
လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုက ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ တစ်နာရီ ၂၅-၃၀ မိုင်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ တစ်နာရီ ၂၀-၂၅ မိုင်၊ ကျန်ကမ်းရိုးတန်းမှာ တစ်နာရီ ၁၈-၂၀ မိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းအသင့်တင့်ကနေ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ၆ ပေကနေ ၁၃ ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ၂ ပေကနေ ၄ ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။